Shaqaale ka tirsan Wasaaradda Shaqada oo tababar loo furay – Radio Muqdisho
Munaasabad tababar loogu furayay qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ay ka qeyb galeen siiyaha Wasiirka Shaqada, Xildhibaanno, agaasimeyaal guud oo ka socday qaar ka mid ah Wasaaradaha dowladda iyo marti sharaf kale ayaa maanta lagu qabtay Muqdisho.
Tababarkan oo socon doono muddo bil ah, isla markaana loo qabtay 26 shaqaale ayaa waxaa iska kaashanaya Wasaaradda shaqada iyo Machadka tababarka iyo Cilmi baarista ee Benaadir Gate.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo arrimaha bulshada Aweys Sheekh Xadaad oo ka hadlay furitaanka tababarka ayaa ka codsaday Shaqaalaha nasiibka u yeeshay inay tababarka ka qeyb qaatan ay waqtiga ilaaliyaan, isla markaana ay ka faa’iideystaan casharada lagu bixin doono muddada uu tababarka socdo.
Xildhibaan Maxamed Cali Daheeye oo isna goobta hadal ka jeediyay ayaa sheegay in tababarka uu kor u qaadayo aqoonta shaqaalaha Wasaaradda, isagoo ku booriyay Madaxda Wasaaradda in la joogteeyo tayeynta aqoonta shaqaalaha Wasaaaradda.
Siihayaha Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya mudane Luqmaan Ismaaciil Maxamed oo furay tababarka ayaa xusay in Wasaaraddu ay dadaal ugu jirto kobcinta aqoonta shaqaalaha Wasaaradda, waxaana uu kula dar daarmay howla wadeenada tababarka ka qeyb galaya in ay shaqadooda ku dabaqaan waxyaabaha ay bartaan.